Thit Htoo Lwin: 6/5/11 - 6/12/11
အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့မူ ခရစ်တော်၌ အိပ်ပျော်ပြီ
ယုယမိုး Tuesday, 14 June 2011 19:03 မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောက၏ အနုပညာ ငွေကြယ်တပွင့်ဖြစ်သူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နွဲ့နွဲ့မူသည် ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီ မိနစ် ၅၀ အချိန်က
6/14/2011 07:13:00 PM
ရည်းစားထားတော့မယ် ဆိုရင် ပရိသတ် ကို အရင် ဖွင့်ပြော မယ့် ရတနာမိုင်
မိုင်လေးရဲ့ ဂီတ အပေါ်ခံစားမှု လေးပြောပါဦး။
သီချင်းတွေ ဆိုတာ မိုင်လေးနဲ့ ငယ်စဉ် ကတည်း ကရင်းနှီး ပြီးသားပါ။ မိုင်လေး ကသီချင်း တွေ ဂီတတွေ ကြား ထဲမှာ ကြီးပြင်း လာတာဆိုတာ ဂီတ ကိုပိုပြီးကြိုက်တယ်။ ပိုပြီး ရူးသွပ် ၀ါသနာ ပါတယ်။ အခုတော့ သရုပ်ဆောင် တာထက် ဂီတ ဘက်ကို ပိုပြီး သစ်ထူးလွင်
6/14/2011 07:41:00 AM
သုံးနှစ်လောက် တွဲလာပြီးမှ နောက်တစ်ယောက် နဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ထားခဲ့တဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားတဲ့ ချမ်းချမ်း
သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှာ သွား ရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်းတစ် ယောက် ချစ်သူ မော်ဒယ်လ် သရုပ် ဆောင်ဘုဏ်းသိုက် နဲ့လမ်းခွဲ လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းက ပရိသတ်များကြား မှာ ရေပန်းစား နေပါတယ်။ ချမ်း ချမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက်မှာ ချစ်သူနဲ့ဘာ ကြောင့် လမ်းခွဲ ရတယ်ဆိုတာကို မေး မြန်းတဲ့ အခါသူမကလည်း ခံစားချက် အပြည့်နဲ့ သစ်ထူးလွင်
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ကချင်သတင်းဌာန ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIA) ၏ အခိုင် အမာ တပ်စခန်း ဖြစ်သည့် ဘွမ်ဆဲန်
(Bum Sen Post) တောင်အား မြန်မာစစ်တပ်မှ သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ အင်အား (၉၀၀) ခန့်ရှိ တပ်ရင်း (၈) ရင်း၏ လက်နက်ကြီးများ ဆက်တိုက် ပစ်ခတ်နေခြင်းကြောင့် KIA သည် ယမန်နေ့ည ၇နာရီခွဲတွင် ဘွမ်ဆဲန် တောင်မှ နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရခြင်း
6/14/2011 07:33:00 AM
KIA ရှေ့တန်း တပ်စခန်း တခု ဆုတ်ခွာလိုက်ရ
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ဇော်ကြီး သတင်း - သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက် မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KIA တို့ ယခုလ (၉) ရက် နေ့မှ စတင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး KIA ရှေ့တန်းစခန်းတစ်ခု ဆုတ်ခွာပေး သစ်ထူးလွင်
6/13/2011 06:33:00 PM
KIA နဲ့ အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးသူ ထောင်ဂဏန်းရှိ
KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေအကြား ဒီနေ့ တနေကုန်နီးပါး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေပြီး ဒေသခံပြည်သူတွေ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ဆန်ဂန် KIA တပ်ရင်း ၁၅ နယ်မြေအတွင်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က KIO ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်များ အကြား သစ်ထူးလွင်
6/13/2011 06:32:00 PM
နောက်ဆုံး KIO ဆက်ဆံရေးရုံး ရုပ်သိမ်းပြီး ပြည်တွင်းစစ်သို့ ဦးတည်
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ကချင်သတင်းဌာန သတင်း - ကချင်သတင်းဌာန မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော် မြစ်ကြီးနားရှိ နောက်ဆုံး
KIO ဆက်ဆံရေးရုံးချုပ် (သံရုံး )အား တနင်္ဂနွေ နေ့လည်မှ စတင်ရုပ်သိမ်း လိုက်ပြီးနောက် ပြည်တွင်းစစ် သို့ဦးတည်လာပြီ ဖြစ်သည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဆက်ဆံရေးရုံးချုပ်နှင့် KIO ပိုင် ဘူးဂါး ကုမ္ပဏီတို့အား တနင်္ဂနွေ နောက်ဆုံးထားကာ ရုပ်သိမ်းပေးရန် ရာဇသံပေးခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ရုပ်သိမ်း လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊၊
မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်အား ခုခံရန်ပြင်နေတဲ့ KIA စစ်သားများ။
ဆက်ဆံရေးရုံးနှင့် ဘူဂါးရုံးတွေကို တနင်္ဂနွေနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ရုပ်သိမ်းခိုင်းတယ်။ တာကြောင့် သစ်ထူးလွင်
6/13/2011 06:23:00 PM
ခနောက်စိမ်း သတ္တုသိုက်များ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
Monday, 13 June 2011 13:17 ﻿
ပြည်ပပို့ကုန် တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်တန်လျှင် ကျပ် ၃၈ သိန်းဝန်း ကျင်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓိကထား တင်ပို့နေရသည့် ခနောက်စိမ်းသတ္တု အားတန်ချိန်များစွာ ထုတ်ယူနိုင်သည့် ခနောက်စိမ်းသတ္တုသိုက်များကို ကရင်ပြည်နယ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားကြောင်း
6/13/2011 06:19:00 PM
အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် တန်ဖိုးတူ
သတ်မှတ်ထားသည့် FEC ဈေးနှုန်းမှာ
တယူနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်ကျော်
နိမ့်ကျနေသည် (ဓာတ်ပုံ - AP)
ဧရာဝတီ Monday, 13 June 2011 17:29 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် တန်ဖိုးတူညီသည်ဟု သတ်မှတ် ထုတ်ဝေထားသော FEC (foreign Exchange Certificate) တယူနစ်လျှင် ဒေါ်လာထက် ကျပ် ၁၀၀ ကျော် နိမ့်ကျနေ
6/13/2011 06:10:00 PM
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(37)
6/13/2011 11:58:00 AM
နေပြည်တော်မြို့နယ်အချို့ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် စတင်ညွှန်ကြား
၀င်းကိုကိုလတ် အတွဲ ၂၇ ၊ အမှတ် ၅၂၁ ( ၁၀-၁၆ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၁)
နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေအတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခများ ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် နေပြည်တော် ကောင်စီဝင်များက ညွှန်ကြားထားကြောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက သစ်ထူးလွင်
6/13/2011 11:51:00 AM
အမေရိကန်က အလိုရှိသူတစ်ဦးအား မြန်မာမှလွှဲပြောင်းပေး
ဂျက်ဖရီဂေါ့ဒတ် သစ်လွင်ဘာသာပြန်သည်။ အတွဲ ၂၇ ၊ အမှတ် ၅၂၁ ( ၁၀-၁၆ ၊ ၆ ၊ ၂၀၁၁)
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လိမ်လည်မှုအပါအ၀င် ပြစ်မှုများအတွက် အလိုရှိနေသူတစ်ဦးအား အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးတွင် အကူအညီပေးခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာအစိုးရအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း သစ်ထူးလွင်
6/13/2011 11:40:00 AM
Sunday, 12 June 2011 14:38 အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ၀န်းကျင်ကုန်ကျမည့် မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုတစ်လုံးကို ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်ပိုင်ဂြိုဟ်တု ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလွှတ်တင်သွားရန် ရှိကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးတင့်လွင်က ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်မှု ကွန်ရက်စနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့်တပ်ဆင်ရေး အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၁) နှင့် အခြေခံ ပစ္စည်းထိန်းသင်တန်း (၀၁/၁၁-၁၂)
6/12/2011 06:58:00 PM
ဆရာမောင်သော်က ပြောတဲ့ ပုံပြင်များ(၆)
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အကြောင်း နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်တွေအကြောင်းကို စာပေစင်မြင့်ပေါ်ကနေ ဆရာမောင်သော်က ဟောပြောတိုင်း ‘အဲဒီလူကြီး ဒီအကြောင်းတွေဟောတာ ကြားရဖန်များပါပြီကွာ၊ သစ်ထူးလွင်
6/12/2011 12:09:00 AM
ကမ်းခြေမှာ အပမ်းဖြေနေတဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
6/11/2011 08:06:00 PM
စည်သူ Saturday, 11 June 2011 19:27 နေပြည်တော် မြို့မဈေးတွင် ယမန်နေ့ညက ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ “ည
အုံးကနဲ အသံကြားလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပြေးသွားကြည့်တော့ သစ်ထူးလွင်
Bomb explosion in Myanmar’s capital Naypyitaw wounds 3
By Associated Press, Updated: Saturday, June 11, 6:25 AM
Myanmar — Myanmar’s government saysabomb planted inamarket has wounded three people in the capital.
A resident contacted by phone Saturday also confirmed the blast.
Bombings are rare but not unknown in Myanmar, where pro-democracy activists and ethnic groups are at odds with the military-backed regime.
6/11/2011 07:27:00 PM
ဒီပဲယင်း ရုပ်သံ မှတ်တမ်း
NLD ဒုဥက္ကဌဦးတင်ဦး နှင့် ဦးစိုးသိန်း(မှတ်တမ်းတင် ကင်မရာသမား)NLD ဒီပဲယင်း ဖြစ်ရပ်မှန် ပြောပြချက်တွေကို နားထောင် ကြည့်ရအောင်--
ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့ သက်မွန်မြင့်
Written by ခင်လေးမြင့် Saturday, 28 May 2011 09:44 သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အချိန်တွေ များစွာကို ရင်းပြီး ကျော်ဖြတ် ကြိုးစား ကြရတဲ့ သူတွေ အများကြီး ရှိမှာပါ။
ကြိုးစားမှု လုံ့လ ၀ီရိယ ရှိရင် ဘယ်အရာမဆို
အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ချင်းပြည်နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို လာပြီး သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ သူက သက်မွန်မြင့် ဆိုတာ သိထားပြီး ကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်က
6/11/2011 10:16:00 AM
ဒ်ီပဲယင်း ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပါသည့် မော်တော်ကားမောင်းနှင်သူ ကိုကျော်စိုးလင်း ၏ အတွေ့အကြုံများ ပြောပြချက် အပိုင်း ၁
6/11/2011 09:52:00 AM
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၅၁ မိနစ်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သဘောထား ကွဲလွဲမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုအကြောင်း ဟောပြောချက် နှစ်ရပ်ကို ဘီဘီစီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းအစီအစဉ်မှ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင်
6/11/2011 08:16:00 AM